Dalka Nigeria oo ciidamo u soo diray Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Dalka Nigeria oo ciidamo u soo diray Soomaaliya
Ciidamo boolis ah oo ka socda Dalka Nigeria ayaa soo garay Soomaaliya, si ay ugu biiraan howlgalka Midowga Afrika gaar ahaan qaybta Booliiska.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamo ka kooban 144 askari oo boolis ah oo ka socda dalka Nigeria ayaa soo gaaray Soomaaliya, si ay uga mid noqdaan howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ‘AMISOM’ muddo hal sano ah.
Ciidamadaan oo u badan Saraakiil ayaa si gaar ah usoo qaatay tababar la xiriira howlgalka nabad ilaalinta, waxayna la-talin iyo taageero hawlgalba siin doonaan Ciidanka Booliska Soomaaliya.
Isku duwaha Howlaha Booliska AMISOM ahna Ku xigeenka Taliyaha Booliska DCP, Daniel Ali Gwambal ayaa sheegay in 30 sarkaal oo boolis ah la geyn doono magaalada Beledweyne ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle, halka inta soo hartayna ay ka shaqeyn doonaan caasimadda dalka ee Muqdisho.
“Si loo dhammeystiro howl sharciyeedka AMISOM ee lagu taageerayo Soomaaliya si gaar ah Booliiska Soomaaliya waxa ay saraakiishaan ilaalinayaan amniga iyagoo la howlgalaya Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed” Ayuu yiri Daniel Ali Gwambal.
Samuel Ita oo ah taliyaha ciidamada soo gaaray dalka, ayaa sheegay in saraakiishu diyaar u yihiin gudashada waajibaadka saaran.
“Waxaan u nimid inaan doorkeena ka ciyaarno soo celinta nabad waarta oo ka dhalata halkan Soomaaliya. Waxaan ku tala jirnaa inaan tababarno oo aan la talinno booliska Soomaaliyeed si loo hubiyo la jaanqaadka heerarka caalamiga ah”.